सेठ Klarman उद्धरण: उनको सबैभन्दा राम्रो उद्धरण, को हुनुहुन्छ र मूल्य लगानी | अर्थतन्त्र वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | 28/09/2021 18:44 | सामान्य अर्थव्यवस्था
शेयर बजार मा लगानी गर्दा विचारहरु, रणनीतिहरु र महत्वपूर्ण विचारहरु प्राप्त गर्न को लागी, सेठ Klarman को वाक्यांशहरु सबै भन्दा राम्रो त्यहाँ छ। एक अरबपति लगानीकर्ता भन्दा सल्लाह दिन को लागी अरु कोहि उपयुक्त छ? उनी धेरै सानो उमेर मा वित्त को दुनिया मा सक्रिय हुन थाले। यो ध्यान दिनुपर्छ कि आज, वर्ष २०२१ मा, उनीसँग १.५ अर्ब डलरको सम्पत्ति छ।
यदि तपाइँ यस लगानीकर्ता को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ र सेठ Klarman र उनको लगानी रणनीति को सबै भन्दा राम्रो वाक्यांश जान्न चाहानुहुन्छ, यो लेख नछुटाउनुहोस्। किनभने मूल्य लगानी को एक वफादार अनुयायी हो, हामी यो पनि शेयर बजार को यो दर्शन के मिलेर व्याख्या गर्दछौं।
1 सेठ Klarman मूल्य लगानी को बारे मा सबै भन्दा राम्रो उद्धरण
1.1 मूल्य लगानी के हो?
2 सेठ Klarman वित्त र मनोविज्ञान को बारे मा सबै भन्दा राम्रो उद्धरण
3 सेठ क्लार्मन को हुन्?
सेठ Klarman मूल्य लगानी को बारे मा सबै भन्दा राम्रो उद्धरण
Klarman बाट केहि धेरै विशिष्ट उद्धरण सूचीबद्ध गरेर शुरू गरौं। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो अमेरिकी अर्थशास्त्री मूल्य लगानी द्वारा सबै भन्दा माथि शासित छ, कि हामी पछि यो के हो भनेर व्याख्या गर्नेछौं। तर अब हामी पहिले यो लगानी रणनीति संग सम्बन्धित सेठ Klarman को सबै भन्दा राम्रो वाक्यांश हेर्न जाँदैछौं:
"हामी ५० सेन्ट को लागी डलर किन्ने को रूप मा मूल्य लगानी परिभाषित गर्दछौं।"
"मूल्य लगानी को बारे मा गूढ केहि छैन। यो केवल एक वित्तीय सम्पत्ति को आन्तरिक मूल्य निर्धारण र त्यो मूल्य मा एक धेरै छुट मा किन्न को लागी हो। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको धैर्यता र अनुशासन कायम राख्नु मात्र हो जब कि मूल्यहरु आकर्षक हुन्छन् र बेच्दा बेच्नु पर्छ, छोटो अवधिको झुकाव बाट बच्न को लागी धेरै जसो बजार सहभागीहरुलाई घेरिएको छ।
"मूल्य लगानी अर्थशास्त्र र मनोविज्ञान को बीच चौराहे मा छ। अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण छ किनकि तपाइँ सम्पत्ति वा व्यवसाय को मूल्य बुझ्न को लागी आवश्यक छ। मनोविज्ञान मात्र महत्वपूर्ण छ किनकि मूल्य लगानी समीकरण मा एक महत्वपूर्ण रूप मा महत्वपूर्ण घटक हो कि जोखिम र एक लगानी को फिर्ती निर्धारित गर्दछ। मूल्य, निस्सन्देह, वित्तीय बजारहरु द्वारा निर्धारित गरीन्छ, आपूर्ति र माग को विकृति को कारण फरक फरक प्रत्येक सम्पत्ति को लागी। "
"मैले कहिल्यै कसैलाई भेटेको छैन जो दीर्घकालीन लगानी को दुनिया मा सफल भएको छ एक मूल्य लगानीकर्ता बिना। मेरो लागी, यो E = MC जस्तै हो2 पैसा र लगानी। "
"केहि इच्छुक र मूल्यवान लगानीकर्ता बन्न को लागी पर्याप्त समय र प्रयास समर्पित गर्न सक्षम छन्, र ती मध्ये एक मात्र सफल हुन को लागी सही मानसिकता छ।"
"सट्टेबाजहरु को विपरीत, जो कागज को टुक्रा को रूप मा स्टक को बारे मा सोच्छन् कि मात्र उनीहरु संग व्यापार गर्न को लागी, मूल्य लगानीकर्ताहरु शेयर स्वामित्व को टुक्रा को रूप मा हेर्छन्।"
"मूल्य लगानी धैर्य र अनुशासन को उच्च खुराक को आवश्यकता छ।"
"मूल्य लगानी को पिता को रूप मा, बेन्जामिन ग्राहम, १ 1934 ३४ मा भन्नुभयो, समझदार लगानीकर्ताहरु लाई के गर्ने मा एक मार्गदर्शक को रूप मा होइन, तर अवसरहरु को एक निर्माता को रूप मा हेर्छन्।"
"मूल्य लगानी, प्रभाव मा, विचार को प्रचार गर्दछ कि कुशल बजार परिकल्पना अक्सर गलत छ।"
"मूल्य लगानीकर्ता को रूप मा हाम्रो मिशन बार्गेन्स कि वित्तीय सिद्धान्त को अस्तित्व छैन भन्छन् किन्नु हो।"
"यी सौदाहरु किन्ने लगानीकर्तालाई सुरक्षा को मार्जिन प्रदान गर्दछ, जो अशुद्धिहरु, गल्तीहरु, दुर्भाग्य वा आर्थिक र व्यापारिक शक्तिहरु को उल्टो को बिरुद्ध सुरक्षा को रूप मा कार्य गर्दछ।"
"प्रत्येक वित्तीय सम्पत्ति एक निश्चित मूल्य मा किन्न को लागी एक विकल्प हो, एक उच्च मूल्य मा पकड र एक अधिक मूल्य मा बेच्नुहोस्।"
मूल्य लगानी के हो?
मूल्य लगानी को रूप मा पनि जानिन्छ, मूल्य लगानी एक लगानी दर्शन वा रणनीति हो। यसको माध्यम बाट, सकारात्मक रिटर्न एक सुसंगत र दीर्घकालीन तरीका मा उत्पन्न गरीन्छ। यो २ 2918 १XNUMX मा उत्पत्ति भएको हो, जब डेभिड डोड र बेंजामिन ग्राहम तिनीहरूले यो सिर्जना गरे र प्रसिद्ध कोलम्बिया बिजनेस स्कूल मा आफ्नो कक्षा मा पढाए।
मूल्य मान के हो?
यस तथ्य को बावजुद कि यसको निर्माताहरु दुई अर्थशास्त्रीहरु थिए कि हामीले माथि उल्लेख गरेका छौं, यसले यसलाई लोकप्रिय बनायो वारेन बफेट। यो बेन्जामिन ग्राहम को एक शिष्य र धेरै सम्भवतः कहिल्यै सबै भन्दा राम्रो लगानीकर्ताहरु मध्ये एक थियो। तर कसरी मूल्य लगानी काम गर्दछ?
खैर, यो गुणस्तरीय धितोपत्रहरुको अधिग्रहण मा आधारित छ तर एक मूल्य मा कि तिनीहरुको वास्तविक वा आन्तरिक मूल्य तल छ। ग्राहम को अनुसार, आन्तरिक मूल्य र वर्तमान मूल्य को बीच अंतर सुरक्षा को मार्जिन हो। यो अवधारणा मूल्य लगानी को लागी आधारभूत छ।
यो दर्शन को अनुसार, जब पनि बजार मूल्य शेयर को वास्तविक मूल्य तल छ, सबैभन्दा सम्भावित कुरा यो हो कि मूल्य भविष्य मा बढ्दो अन्त हुनेछ, जब एक बजार समायोजन हुन्छ। जे होस्, यो सुरक्षा वा स्टक को वास्तविक मूल्य के हो अनुमान गर्न को लागी केहि समस्याग्रस्त हुन सक्छ, र यो पनि भविष्यवाणी गर्न को लागी जब एक बजार समायोजन हुनेछ, त्यो हो, जब मूल्य वृद्धि हुनेछ।
सेठ Klarman वित्त र मनोविज्ञान को बारे मा सबै भन्दा राम्रो उद्धरण
यो कुनै रहस्य छैन कि शेयर बजार निकट मनोविज्ञान संग सम्बन्धित छ, र यो बिल्कुल सेठ Klarman को वाक्यांश मा परिलक्षित हुन्छ। परिवर्तनहरु कि बजार मा हुन सक्छ धेरै सामाजिक घटनाहरु संग गर्न को लागी छ कि डराउन वा लगानी निर्णय गर्दा मानिसहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ। तेसैले, सेठ Klarman को वाक्यांश धेरै रोचक हुन को लागी बाहिर जान्छ र म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ एक नजर लिनुहोस्:
"सफल लगानीकर्ताहरु अक्सर अचल रहन्छन्, अरुको लालच र डर लाई उनीहरुको पक्षमा काम गर्न अनुमति दिन्छन्।"
"लगानी, जब यो सजिलो लाग्छ, तब हुन्छ जब यो सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ।"
"जनता को विशाल बहुमत सहमति संग सहज छन्, तर सफल लगानीकर्ताहरु को एक विपरीत झुकाव हुन्छ।"
"धेरैजसो लगानीकर्ताहरु अल्पकालीन प्रवृत्तिहरु, दुबै राम्रो र नराम्रो, अनिश्चितकाल को लागी भविष्य मा प्रोजेक्ट गर्न को लागी हुन्छन्।"
"धेरैजसो मानिसहरुमा बथान बाट अलग रहन र थोरै अवधिको रिटर्न सहन को लागी महान दीर्घकालीन पुरस्कार को पुरस्कार काट्न साहस र सहनशक्ति को कमी छ।"
"बजार अनियमितताहरु शोरबाहेक अरु केहि होइनन् कि धेरै लगानीकर्ताहरुलाई यो चुप लाग्न धेरै गाह्रो लाग्छ।"
"सहकर्मीहरु संग रहन को लागी दबाव ले निर्णय लाई अझ गाह्रो बनाउँछ।"
"मानव स्वभाव यति भावुक छ कि यो बारम्बार बादल को कारण हो, सम्पत्ति मूल्यहरु दुबै दिशाहरु मा पार गर्न को लागी।"
"हाम्रो मस्तिष्क कसरी काम गर्दछ बुझ्दै - हाम्रो सीमाहरु, असीमित मानसिक सर्टकट, र गहिरो बैठे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहहरु) सफलतापूर्वक लगानी को लागी एक कुञ्जी हो। Baupost मा, हामी विश्वास गर्दछौं कि यो कहिले काहिँ सजीलो भविष्यवाणी गर्न को लागी कसरी लगानीकर्ताहरु केहि परिस्थितिहरु मा एक कम्पनी को विफलताको अन्त्य को भविष्यवाणी गर्न को लागी भन्दा सजीलो हुन्छ। बजार मा चरम समयमा, हाम्रो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहहरु को बारे मा सचेत रहन को लागी भावनात्मक overreaction बाट बच्न, यो उनीहरु लाई आफुलाई भन्दा राम्रो संग बजार सहभागीहरु जान्न सम्भव छ। "
"यो भीड संग लड्न को लागी मनोवैज्ञानिक रुपमा गाह्रो छ, एक विपरीत स्थिति लिनुहोस् र यसमा रहनुहोस्।"
"के गलत हुन सक्छ भन्ने बारे चिन्ताले लामो समयसम्म खराब प्रदर्शन गर्न सक्छ।"
"शेयर बजार दुबै दिशा मा overreactions को लागी जिम्मेवार मानव व्यवहार को चक्र को कहानी हो।"
सेठ क्लार्मन को हुन्?
मई २१, १ 21 ५, सेठ एन्ड्र्यू Klarman न्यूयोर्क मा जन्म भएको थियो, कि उनी एक अरबपति लगानीकर्ता बन्नेछन्। यो उपलब्धि को अतिरिक्त, उहाँ एक हेज कोष प्रबन्धक र "सुरक्षा को मार्जिन" पुस्तक को लेखक बन्नुभयो। जबकि उनका बुबा जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय मा एक अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो, उनकी आमा एक मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। दुबै प्रभावहरु धेरै राम्रो संग सेठ Klarman को वाक्यांश मा प्रतिबिम्बित छन्, जो मनोविज्ञान संग वित्त को दुनिया मा सामेल छन्।
मात्र दस बर्षको उमेर मा, सानो सेठ पहिले नै आफ्नो पहिलो शेयर प्राप्त, जो जोन्सन एण्ड जोन्सन बाट थियो। वर्षौंदेखि, उनले आफ्नो प्रारम्भिक लगानी तीन गुणा गरे। बाह्र बर्ष को उमेर बाट उनी नियमित रूप बाट आफ्नो दलाल लाई कल गर्न थाले अधिक शेयर उद्धरण प्राप्त गर्न को लागी।
जस्तो आशा गर्न सकिन्छ, सेठ Klarman अर्थशास्त्र मा म्याग्ना सह laude स्नातक। उनले पछि हार्वर्ड बिजनेस स्कूलमा प्रवेश गर्नु अघि १ months महिना काम गर्ने निर्णय गरे। स्नातक पछि, उहाँले हार्वर्ड प्रोफेसर विलियम जे Poorvu "द Baupost समूह", एक हेज कोष संग स्थापित।
पहिलो केहि बर्षहरु को लागी Klarman Baupost को कप्तान मा थियो, उनी केवल वाल स्ट्रीट समुदाय मा व्यापक रूप मा स्वीकार गरीएको छैन कि कम्पनीहरुमा लगानी गर्न चाहन्थे। यसको लागी, उनले सुरक्षा को तथाकथित मार्जिन को उपयोग र जोखिम को राम्रो संग व्यवस्थापन मा धेरै जोड दिए। तपाईं आफ्नो रणनीति बाट कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, सेठ Klarman एक काफी रूढ़िवादी लगानीकर्ता हो। सामान्यतया तपाइँ तपाइँको लगानी पोर्टफोलियो मा एक महत्वपूर्ण राशि छ। यो पनि ध्यान दिनु पर्छ कि, केहि अवसरहरुमा अपरंपरागत रणनीतिहरु को उपयोग गरीरहेको बावजुद, यो सधैं धेरै उच्च रिटर्न प्राप्त गर्न व्यवस्थित छ।
मलाई आशा छ कि सेठ Klarman को उद्धरण तपाइँ जारी राख्न वा शेयर बजार मा लगानी शुरू गर्न को लागी प्रेरित गरीएको छ। मूल्य लगानी एक लोकप्रिय रणनीति हो र व्यापक रूप मा हाम्रो समय को महान लगानीकर्ताहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ, त्यसैले यो उनीहरुको सल्लाह को पालन गर्न चोट गर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » सेठ Klarman उद्धरण